Home Wararka Gudaha Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka oo sheegtay Ciidanka Macawiisleeyda eey ku...
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka oo sheegtay Ciidanka Macawiisleeyda eey ku dileen 10 Xubnood oo Al-Shabaab ah Bacda ee Gobolka Hiiraan
Ciidamada lagu Magacaabo Macawiisleyda ee Gobolka Hiiraan ayaa malahan warar ku ahaay Ururka Al-Shabaab hase yeeshee Taliyaha Ciidanka xoogga dalka Jeneraal Odawaa ayaa ku Guulahas iska sheeganyay ileen Ceeb loma dhinto saas waxa yiri Xubin ka tirsan Macawiisleyda.
Dhanka kale Taliye Odawaa oo warbaahinta qar la hadalay ayaa yiri Ciidanka xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa howgal qorsheeysan ka sameeyay degaanka Qabdho oo hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan halkaas oo mararka qaar lagu arki jiray Xubno katirsan Al-Shabaab.
Howlgalka oo ay sigaar ah u fuliyeen guutada 5aad ee Ciidanka xoogga dalka ayaa ujeedkiisu ahaa sidii degaannada u dhow degmada Matabaan looga saari lahaa Ururka Al-Shabaab oo dhowr jeer weerar ku qaaday degmadaasi Matabaan ee Gobolka Hiiraan.
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka General Odowaa Yuusuf Raage ayaa Idaacadda Ciidamadda Qalabka Sida u sheegay in howlgalka Al-Shabaab looga dilay ku dhowaad 10 Xubnood, sidoo kalena laga bur-buriyay bartii ay shacabka kaga qaadayeen lacagaha.
Sidoo kale Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka General Odowaa Yuusuf Raage wuxuu sheegay in ujeedka howlgalka uu yahay sidii looga hortagi lahaa dhagarta Al-Shabaab, isla markaana shacabka looga dul qaadi lahaa dhibaatada ay ku hayaan.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa todobaadyadii la soo dhaafay waxaa ay kordhiyeen howlgallada ay ka fulinayaan degmooyinka iyo degaannada Gobolka Hiiraan.
Previous articleBaarlamaanka Soomaaliya oo guddi qubaro ah u saaraya kiiska Ikraan Tahliil
Next articleFahad Yaasiin oo ka hadlay xogta ciidamadii tababarka loogu qaaday Eratariya
Kenya iyo Soomalaiy: Dhowr jeer oo hore oo ay foodda is...
Siyaasiyiinta Soomaalida Kenya oo sheegay arirn ay ka doonayaan Xasan Sheekh